LEGO Super Mario နှင့်ငါ့ Nintendo VIP ဆုများယခုရနိုင်သည်
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 338 Views စာ0မှတ်ချက် Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို, Lego, Lego စတိုး, Lego စတိုးဆိုင်များ, Lego စူပါမာရီယို, Lego VIP, LEGO.com, ကျွန်ုပ်၏ nintendo, Nintendo, စူပါမာရီယို, အဆိုပါ LEGO Group, VIP ဆုပေးစင်တာ
အသစ်စက်စက်အမျိုးအစားစုံ Lego စူပါမာရီယို VIP ဆုလက်ဆောင်များကိုယခုမှာယူနိုင်ပါပြီ LEGO.com keychains များနှင့် My Nintendo အမှတ်များအပါအ ၀ င် Nintendo ၏အွန်လိုင်းစတိုး။
ဆုများကိုမူလကသြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရန်စီစဉ်ထားပြီးယခုလမှထုတ်ယူခြင်းမရှိပါ Lego စတိုး ပြက္ခဒိန်၊ ဒါပေမယ့်အခုနောက်ဆုံးမှာရောက်လာတယ် VIP ဆုပေးစင်တာမင်းရဲ့ခက်ခဲတဲ့ VIP အမှတ်တွေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်နှစ်ခုလုံးမှာဖြုန်းနိုင်လိမ့်မယ် စူပါမာရီယို အချစ်ဇာတ်လမ်း
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးပေးနှစ်ခုပါဝင်သည် Lego ငွေကျောထောက်နောက်ခံဖြစ်ပုံရသော Mario နှင့် Luigi သော့ချိတ်များ၊ ကွဲပြားသောနေရာနှစ်ခုတွင်ရရှိနိုင်သည်၊ Luigi ကိုရွေးနှုတ်နိုင်သည်။ VIP ဆုပေးစင်တာ at LEGO.comမာရီယိုသည်ပလက်တီနမ်အမှတ် ၄၀၀ တွင်ရနိုင်သည် Nintendo ၏အွန်လိုင်းစတိုး.
Luigi သည်ပြန်လည်ရယူရန် VIP အမှတ် ၅၀၀ လိုအပ်လိမ့်မည်၊ သင်မှာယူရန်လိုအပ်သည် LEGO.com ၎င်းကိုရယူရန်သင်ရရှိမည့်ကုဒ်ကိုသုံးရန် မင်းရဲ့လက်ရှိ VIP point stash ကဒီလောက်ထိမဆန့်ဘူးဆိုရင်အမှတ် ၅၀ ဖြုန်းတာကမင်းကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ် Lego စူပါမာရီယို သင်၏ PC အတွက် sm၊ wallpaperartဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်။
ပိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာ၎င်း၌အခမဲ့ရနိုင်သော ၂၀၀ My Nintendo ပလက်တီနမ်အမှတ်များဖြစ်သည် VIP ဆုပေးစင်တာ သင်ပြုရန်လိုအပ်သည်မှာ 'ရွေးနှုတ်ရန်' ကိုနှိပ်ပါ၊ လုံးဝအမှတ်သုညကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီး Nintendo ၏အွန်လိုင်းစတိုးတွင်သုံးရန်ကုဒ်တစ်ခုရရှိလိမ့်မည်။ ပလက်တီနမ်အမှတ်များသည်ခြောက်လသက်တမ်းရှိပြီးဆုလာဘ်များနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများမှငွေကိုတောင်းခံနိုင်သည် Lego Mario keychain)
အဆိုပါကူးခေါင်း VIP ဆုပေးစင်တာ မင်းကိုဖမ်းဖို့ Lego စူပါမာရီယို ဆုလာဘ်။ နောက်ဆုံးအသုတ် စူပါမာရီယို အပါအဝင်အစုံ Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို -လူသိနည်းသော Mario bro ကို multiplayer action အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရန်ဖြစ်သည် ယခုရရှိနိုင်.
← Lego 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်သည်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သည်၊ အနည်းဆုံးယခုလောလောဆယ်
My Nintendo နှင့်အတူ LEGO Super Mario အစုအဝေးကြီးကိုအနိုင်ရရန် ၀ င်ပါ →